ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ကမ္ဘာ့ဧဝံဂေလိ သာသနာပြုအဖွဲ့အစည်း အာရှတိုကျ
မိသားစု site ကို
အမေ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် လူ သန်းပေါင်း ၇၀၀၀ အား ပျော်ရွှင်ခြင်းကို
သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း အဖေ ဘုရားသခင်နဲ့ အမေ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး၊ ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို စောင့်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ ၁၇၅ နုင်ိငံ နေရာအနှ့ရှိံ မိသားစုတွေကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ထာဝရ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။ ‘ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပေးခြင်း’ကို ပုံသက်သေပြတဲ့ အမေ ဘုရားသခင်ရဲ့ သင်ခန်းစာကို လိုက်ပြီး၊ လောကကို နွေးထွေးစွာ ပြောင်းလဲစေနေပါတယ်။
နီပေါ၊ ခတ္တမန်ဒူး ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်
စင်္ကာပူ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်
ဖိလစ်ပိုင်၊ ကွီဇုံစီးတီး ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်
နုငိ င်ေံ ပါင်း (၁၇၅)၊ အသင်း တောေ် ပါင်း (၇၀၀၀)က အမေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။
အမေရကိ နသ် မတ္မ မှလမူ ထှုး ချနွ ဆ်ုချြးီမငှ်ြ့ခင်း ။
တစ်သက်တာဆု(၂၀၁၁. ၆.)| ရွှေတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၁. ၆.)
ရွှေတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၄. ၁၁.)| ရွှေတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၅. ၆.)| ရွှေတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၅. ၉.)
ရွှေတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၅. ၁၂.)| ကြေးတံဆိပ်ဆု(၂၀၁၇. ၇.)
အမေရိကန်တွင် အမြင့်ဆုံး လူမှုထူးချွန်ဆု
ရွှေတံဆိပ်ဆု (ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အမြင့်ဆုံးဆု)
တစ်သက်တာဆု (တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် အမြင့်ဆုံးဆု)
ကိုရီးယားအစိုးရဌာန (၃)ခုမှ သမ္မတ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ချြးီမငှ်ြ့ခင်း ။
သမ္မတမှ ချီးမြှင့်သော အဖွဲ့အစည်းဆု(၂၀၁၅. ၅.)
အစိုးရမှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု(၂၀၀၄. ၈.)
သမ္မတမှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု(၂၀၀၃. ၂.)
ကိုရီးယား သမ္မတ အဖွဲ့လိုက်ဆု - နယ်ပယ်တစ်ရပ်တွင် ငါးနှစ်ကျော်ကြာအောင် အကျုိး ပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းကို ပေးအပ်ချီးမြငှ့်သော အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆု၊ ၄င်းဆုကို တိကျသောစစ်ဆေးမှုနှင့် အတည်ပြုချက်များကို ရယူပြီးမှ ချီးမြငှ့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုကို ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ရရှိ ခြင်းမှာ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂဗဟိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးရန် ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့အဆင့်မြင့်ညီလာခံသို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အသင်းတော်ကို ဖိတ်ကြားခြင်း။
“ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ အရေးပေါ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေး အစရှိတဲ့ အမျုိး မျုိးသော အကူအညီပေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ရဲ့လူသား အကျုိး ပြုလှုပ်ရှားမှုတွေ အားလုံးဟာ အမေရဲ့စိတ်ကနေ အစပြုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
- ဘုရားသခင်၏အသင်းတော် သင်းအုပ်ဆရာချုပ် ဂင်(မ်)ဂျူချော(လ်)၏ မိန့်ခွန်း မနိ ခ့် နွ်းအချုပ်(၁၃.၁၂.၂၀၁၆ အမေရကိ နန်ုငိ င် ၊ံ နယူးယောကမြ်ုိ့ ၊ ကလု သမဂဌ္ဂာနချုပ)
အာရတှ င်ွလကခ် ရံ ရခှိဲေ့ သာ အဓကိ ဆမျုားအာရှတိုကျ
အာရနှုငိ င် မျာံးစွာ တင်ွပတ၀် န်းကျငထ် နိ်းသမိ်း ရေး အသပိ ညာပေးခြင်း နငှ့်၊့ သေွးလှူ ဒါန်း မှုမြင်တ့ ကေ် ရးတို့ အတက်ွလပုေ် ဆာငခ်ေဲ့ သာ ကျနွုပ် တ် ၏ုိ့ စတိေ် ရာကုယိ ပ်ါနစှြ်မှုပေ် ဆာငရ် ကွေ် သာ စေတနာဝ့ နထ် မ်းလပ်ုဆောင်မှုများကို အစိုးရရုံးဌာနများက ဆုတံဆိပ်များ၊ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ၊ ဆုများ၊ ထောက်ခံစာလွှာများ ချြးီမငှ်ြ့ခင်းအားဖြင့်ဂဏုြ်ပုကြပါသည။်
ထိုင်းနုင်ိငံ သဘာဝရင်းမြစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ချီးမြှင့်ခြင်း။
ကမောဒ္ဘီးယား ကိုးကယွ ယ်ြုံကညမ် နှု ငှ့်ဘာသာရေးကစိ ရ္စ ပမ်ျားဆုငိ ရ်ာဝန်ြကီး မှဂဏုြ်ပုမတှ တ် မ်းလွှာ ချြးီမငှြ့်ခင်း ။
ဖလိ စပ်ိင်ုလမူ ဖှု လူံေု ရးနငှ့် ဖွံဖြို့းတိုးတကေ် ရးဌာန အပု ခ်ျုပေ် ရးမှူးမှဂဏုြ်ပုမတှ တ် မ်းလွှာ ချြးီမငှ်ြ့ခင်း ။
မွန်ဂိုလီးယား သဘာဝ၊ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးမှဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်း။
အာရှတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်မှုများ“ကမ္ဘာ၏ အမိုးဖြစ်သော ဟိမ၀န္တာတောင်ဆီသို့”
ဖလိ စပ်ိငု ၊် အနိ ယ္ဒိ ၊ ဂျပန၊် မနွ ဂ်ိလုီးယား၊ အငဒ်ိနုီး ရှား၊ သရီ လိ ကာင်္ ၊ ကမောဒ္ဘီးယား၊ ထိငုး ၊ မလေးရှား၊ စကာင်္ ပနူ ငှ့် ပငလ် ယေ် ရမျကန်ှာ ပြငအ် ထက်အမြင်ေ့ ပ ၄၀၀၀ မတီာတငွ ရ်ှေိ သာ ဟမိ ၀နာ္တေ တာငတ် န်း ပေါ်ရှေိ ၀းလေံ ခါငသ်ေီ သာ ရွာ ငယေ် လးဖြစေ် သာ နေီ ပါနုငိ င် ရှိံဆလဲ တ် နွ်း ရွာ လေးအထပိ ငလ်ျှင၊် အားလံုး သော အာရသှားတို့ ပုမိေု ပျာရ် ငွှေ် စရနအ် တကွ ၊် ဘရုားသခင၏် အသင်း တောသ် ည်များစွာ သော ဆောငရ် ကွ ခ်ျကမ်ျားကိုလပုေ် ဆာငလ်ျကရ် ပှိါသည။်
ကိုရီးယားနုင်ိငံ၊ ဒယ်ဂူးတွင်ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နွေရာသီ တက္ကသိုလ်အားကစားပွဲတော်ရှိနုင်ိငံပေါင်း ၁၇၆ နုင်ိငံမှ ထောက်ပံ့ရေးအဖဲမျွ့ား (ထိုနှစ်တွင် ပါဝင်သူပေါင်း ၉၀,၀၀၀)
ဟိုင်ယန် တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ် လျော့ပါးသက်သာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်းနှင့်၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို အစိုးရရုံးဌာနသို့ ကူညီပေးခြင်း (ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူပေါင်း ၁၀၉၇ ဦး)။
ထိုင်းနုင်ိငံ၊ ဘန်ကောက်တွင် သွေးလှူဒါန်းခြင်း။
၈. အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာရှိ ဘန်ဒန်ဂန် အက်တာရာစမ်းချောင်း၌ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။
ဆင်ဟူပါလ်ချော့ခ်နှင့် ကေ့ဗ်ရီတို့တွင် မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရေကန်၊ သန့်စင်ခန်းတို့ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂများ လှူဒါန်းခြင်း (“အမေ၏ကျောင်း” စီမံကိန်း)။
နီပေါနုင်ိငံရှိ မြေငလျင်ဒဏ်ခံဒေသပေါင်း (၇၀၀) အတွက် မြေငလျင်ဒဏ်လျော့ပါးသက်သာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ(ထိုနှစ်တွင် ပါဝင်သူပေါင်း ၁၅,၀၀၀ ကျော်)။ ဟိမ၀န္တာရှိ ဝေးလံသောတောင်ပေါ်ရွာများရှိ မိသားစု (၁,၀၀၀) ထံသို့ အစားအစာများ လှူဒါန်းခြင်း (ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ၁၄ ကြိမ်)။